कसरी छान्ने उत्कृष्ट स्मार्टफोन ? - Living with ICT
Home / Featured / कसरी छान्ने उत्कृष्ट स्मार्टफोन ?
कसरी छान्ने उत्कृष्ट स्मार्टफोन ?
Admin Dec 28, 2016	Leaveacomment
डिस्प्ले साइज र क्वालिटी चेक गर्नुहोस् ः आफूलाई उपयुक्त लाग्ने स्किृन साइज रोज्नुहोस् । डिस्प्ले क्वालिटी रेजोल्युशनस“ग निर्भर हुन्छ । जति धेरै रेजोल्युशन हुन्छ, त्यति नै डिस्प्ले क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ ।
अपरेटिंग सिस्टम ः बजारमा अहिले एन्डोइड, आईओएस र विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भएका मोबाइल छन् । आफूलाई मन पर्ने अपरेटिङ सिस्टमको नया“ भर्सन किन्नु राम्रो हुन्छ ।
प्रोसेसर र र्याम ः प्रोसेसर जति धेरै भयो स्मार्टफोन्को परफरमेन्स द्रुत गतिमा छल्छ । र्याम भनेको सिस्टम मेमोरी हो जसले धेरै एप्लिकेशनका लागि स्पेस दिन्छ भने ह्यागं हुने समस्या हुदैन ।
मेमोरी ः अहिलेका प्रायः स्मार्टफोनमा १६ जिबी या ३२ जिबिको इन्टरनल मेमोरी रहेको हुन्छ । धेरै कुरा फोनमा अटाउनका लागि इन्टरनल मेमोरी धेरै हुनु राम्रो मानिन्छ भने आवश्यकताअनुसार एक्सर्टनल मेमोरी राख्न मिल्ने मोबाइल छान्नुपर्छ ।
क्यामेरा ः फोटोको गुणस्तर आउनुमा क्यामेरामा मेगापिक्सेल मात्रै ठूलो कुरा होइन । यसमा कस्तो लेन्सको प्रयोग भएको छ, कत्रो अपार्चर (aperture) र कत्रो माइक्रोपिक्सेल छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । उदाहरणका लागि सामसुङ ग्यालेक्सी एस सेभेन एजमा १२ मेगापिक्सेलको क्यामेरा छ, तर १३ वा १६ मेगापिक्सेल भएका एन्ड्रोइड स्मार्टफोनभन्दा गुणस्तर फोटो खिच्छ ।
कनेक्टिभिटी ः सिम जिएसएम होस् वा सिडिएमए, थ्रीजी सर्पोट गरोस् वा फोरजी फिचर्समा ध्यान दिनु जरुरी छ । कतिपटक दुईवटा सिम लाग्ने फोनमा पनि एउटा स्लाँटमा ३ जी र अर्को सिम २ जीको हुन्छ । नेपालमा अहिले फोरजी सेवा सुरु हुन लागेकाले फोरजी नेटवर्क भएका स्मार्टफोन किन्नु उपयुक्त हुन्छ ।
ब्याट्री ः स्माटफोनमा साधारण फोनको तुलनामा धेरै ब्याट्री चाहिन्छ । २८०० एमएएच पावरभन्दा धेरैको ब्याट्री किन्नु सुविधाजनक हुन्छ, यस्तो ब्याट्रीले कमसेकम ७ घण्टा चार्ज दिन्छ ।
best smartphone how to choose mobile 2016-12-28
Previous झापाका प्रत्येक स्कुललार्इ साइबर अपराधमुक्त बनाउने अभियान सुरू
Next आइसिटी मार्केटमा स्थापित हुदै – फाल्कोन इन्टरनेशनल (नेटिस)